ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သိမ်းသွင်းဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို သက်ဆင် ရှီနာဝပ် တိုက်တွန်း
ထိုင်းနိုင်ငံကရရှိတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရှီနာဝပ်နဲ့ ထိုင်း ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Yuthasak Sasiprapha ယုသာဆပ် ဆာစီပရာဖါတို့ မကြာခင်က ဟောင်ကောင်ကျွန်းတစ်နေရာမှာ လှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သူတို့လက်အောက်ခံလူဖြစ်အောင် စည်းရုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကို လှို့ဝှက်ဖမ်းယူထားတဲ့ အသံဖိုင်မှာ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တွေ လစဉ်လတိုင်းတွေ့ဆုံပြီး အစားအစာအတူတကွ စားသုံးကြကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လူယုံတော်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ တံခိုးသြဇာကြီးမားသူဖြစ်ကြောင်း၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုလိုချင်ရင် သူ့ကိုအသုံးချနိုင်ကြောင်း၊ သူ့ကို မိမိတို့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် မလွဲမသွေကြိုးစားရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ ပြောကြားထားတဲ့ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲ အသံဖိုင်ကို နားထောင်တဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတစ်ဦးက ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်နဲ့ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ဆာစီပရာဖါတို့ ပြောဆိုစကားတွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သူတို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းထားနိုင်ပြီလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ပြောကြားချက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အမည်ရှေ့ကနေ ရင့်သီးတဲ့အသုံးအနှုံးတစ်ခုလည်း ထိုင်းဘာသာနဲ့ ထည့်သွင်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို လှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဖို့အတွက် ထိုင်း ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက ဟောင်ကောင်ကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရှီနာဝပ်က လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ညီမ ယင်းလတ်ရှီနာဝပ်အနေနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရာထူးကိုပါ ပူးတွဲရယူဖို့နဲ့ ဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်း ရာထူးအပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အပြင် သူတို့ပြောဆိုစကားတွေထဲမှာ ထိုင်းဘုရင်မိသားစုအကြောင်းတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလို တွေ့ဆုံပွဲကို ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က လှို့ဝှက်အသံဖမ်းထားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သပ်ဆင်ရှီနာဝပ်ဟာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အကြိမ်အတော်များများ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလသြင်္ကန်ရက်တွေအတွင်းက မေမြို့မှာ တစ်ညအိပ်ခရီးသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး အတူတကွ ရေကစားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်မှာ သက်ဆင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မေမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလား၊ နေပြည်တော်မှာ တွေ့တာလားတော့ မသိရပါဖူး။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဝေဖန်ပြောကြားချက်ကို မသိရသေးပါဖူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆာစီပရာဖါကတော့ မဟုတ်မမှန်ဖူးလို့ ငြင်းဆိုပါတယ်။
အဲဒီလှို့ဝှက်ဖမ်းယူထားတဲ့ အသံဖိုင်ကို RFA က ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
FA အထောက်အထားနဲ့ ထိုင်းဘာသာ အသံရော/မြန်မာဘာအသံရော ကြားချင်လှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကာ/ချုပ် ကို ရင့်ရင့်သီးသီး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သိချင်ပါတယ်။အစဉ်အားပေးလျှက်...... တောင်တွင်းသား။
Taksin Knows exactly the weakness of Than Shwe and his associates ( corrupt generals) and how to handle them because of their poor leadership.
If Shwe Man or Min Aung Hlaing becomes president in 2015, the country will be under influence of China and Thai.
Jul 08, 2013 07:07 PM
RFA မှာ အထောက်အထားတွေ ရှိနေပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုငြင်းအုံးမလဲ? ဖြေရှင်းချက် လည်းကြားချင်တယ်။ RFA ရဲ့ အထောက်အထားလည်း သိချင်၊ မြင်ချင်ပါတယ်။
Jul 08, 2013 06:36 PM
Taksin is very greedy guy who is also Chinese-minded. Chinese know how to make big deal with dictators and they have been doing lots of big deal for so many years in Burma. Within 10 or 15 years Burma will be in the hands of foreigners if they do not make genuine reforms.
Jul 07, 2013 06:25 PM
ကာ/ချုပ် ကို ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တွေ ရင့်ရင့်သီးသီးပြောကြတာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သတင်းအားလုံးကိုဖော်ပြပေးပါ RFA ။
Jul 07, 2013 01:08 PM